အသက် ၄၂ နှစ် - ၁၅ နှစ်အတွင်းငါမပြီးသေးဘူး၊ အခုငါလုပ်နိုင်တယ် - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က Porn
အသက် ၄၂ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်းသဘာဝအားဖြင့် 'အပြီးသတ်' ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါ။ ယခုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်ပါပြီ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ကျော်နေပြီး PMO'ing ကိုနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်နေပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် DE (နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှု) မှခံစားခဲ့ရ / ခံစားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံး ၁၅ နှစ်အတွင်း Oral, Vaginal သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်အော်ဂဇင်ကိုမရရှိခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးခြားသည်ဟုထင်ခဲ့ပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအလွန်အမင်းဖိအားများနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် GF နဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတောင်မှမလွဲနိုင်တဲ့အထိရောက်သွားတယ်။ အဆုံးသတ်ရရင်ငါတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုပြန်ထည့်ရမယ်။
NoFap ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး YourBrainOnPorn ကကျွန်ုပ်နှင့်အမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်ရသောပြသနာများကိုနားလည်စေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် Porn အပေါ်စွဲလမ်းမှုနှင့် P ကိုလိုက်နာသည့် M'ing မှ Dopamine High တို့ဖြစ်သည်။
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် ကွောကျဘှယျသော မိနစ်အတွင်းပြဿနာတစ်ခုခြင်းမရှိဘဲရှေ့မှောက်၌မျက်နှာပြင်နှင့်အိုထိုင်ဖို့ပေမယ့်တကယ်အာရုံငါးပါးနှင့်အကြောက်မက်ဘွယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်းထိုသို့ပြုမှနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချနိုင်မှ။
ကောင်းပြီဒီနေ့အောင်မြင်မှုကြီးပါ၊ ငါတို့အရမ်းရင်းနှီးတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပြီး PIV အတွင်းမှာငါသဘာဝအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ GF သည်ကျွန်ုပ်၏ NoFap reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝထောက်ခံခဲ့ပြီး၊ ဤအဖြစ်အပျက်ကကျွန်မတို့နှစ် ဦး စလုံးမျက်ရည်ကျခဲ့သည်။
ငါကတက်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ငါနေဆဲ up ပြုလုပ်ထားရန်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောအခြားသူများကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ အဆိုပါ PMO သံသရာဆန့်ကျင်လေးစားခြင်းနှင့်စစ်တိုက်ကြ၏ခံရဖို့ရှိပါတယ်တစ်ခုစွဲဖြစ်ပါတယ်။
LINK - ငါ NoFap ၏ 15 ရက်အကြာငါ 41 နှစ်အတွင်းသဘာဝ '' ကိုလက်စသတ် 'ကြပြီမဟုတ်။
နောက်ဆုံးထွက် - NoFap (တကယ်တော့ငါ NoPMO လုပ်နေတယ်ဟုခံစားရသည်) fix fix / rebet / freakin 'fix fix များကိုပြုပြင်သည်
ငါ၏အ Saga မှနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခု - အကယ်၍ မင်းအလိုရှိပါကလွန်ခဲ့သော ၁၁ ရက်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်အဓိကအောင်မြင်မှုများအနက်တစ်ခုကိုတွေ့နိုင်သည်။
ကျွန်တော့်မှာဒုတိယအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေလိုပဲကားတစ်စီးရဲ့နောက်ကျောမှာဆယ်ကျော်သက်တွေလိုပဲကျွန်တော့်ကိုအံ့သြလောက်အောင်အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ရည်းစားနဲ့ PIV လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့လို့ - ၅ မိနစ်အကြာမှာ DAMNIT I FINISHED - လုပ်တယ် ငါပိုရှည်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမတစ်လျှောက်သွားနေစဉ်သူမကမင်းရဲ့မင်းကိုလာချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့ငါပြီးရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်၊ (ပြီးခဲ့သည့်အချိန်နှင့်မတူဘဲမျက်ရည်မရှိ)
ငါသဘာဝအတိုင်းမလာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သည်ကိုမယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်နေစဉ်ငါ့လက်ဖြင့်သာ ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ပြproblemsနာများကကြီးမားသည်။
ငါ NoPMO / NoFap မှာနှစ်လတောင်တောင်မှပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်ပြီ။
ကမှာငါ့အ NoFapstonauts journeymen ထားပါ။ သငျသညျစေခဲ့ပါတယ်ကြောင်းနှစ်နှင့် Porn နှစ်ပေါင်းများစွာ shit ၏မဏိမေ Web-wire ကိုပြန်လည်ပေးနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးထွက် - ငါ> ရက်ပေါင်း 140 မှရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ DE ကိုကုသပေးခဲ့သည် ငါမရောက်မှီတိုင်အောင်ငါကအားလုံးထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါဒါကို 'ငါပြန်လုပ်လိုက်တယ်၊ နို့စို့တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါအောင်နိုင်တော့မယ်' ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ရက်ပေါင်း ၁၄၀ ခရီးကကျွန်တော့်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်ရန်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
ငါအလုပ်လုပ်တဲ့လူဖြစ်လာခဲ့သည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၂ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏လက်များကိုအသုံးမပြုဘဲ fetish porn ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲပထမဆုံးအကြိမ်သုတ်သင်နိုင်ခဲ့သည်။ တခါတခါတော့ငါလုပ်နိုင်တာကိုငါအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အံ့အားသင့်စရာကြီး - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် (၄၂yo) ကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်မှလက်ဖြင့်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ BAM! ကမ္ဘာ၏ထိပ်တန်း!
ငါပျောက်ကင်းသွားပြီထင်တယ် ငါပါ ၀ င်တာဟာ NoFap မဟုတ်ဘူး၊ တကယ် NoPMO ပဲလို့တောင်စစဉ်းစားမိတယ်။
NoPMO (မှားယွင်းစွာ) ငါ့ကိုပါစေနေသမျှကာလပတ်လုံးငါမ Porn လုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်သာရံဖန်ရံခါ (တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်) Masturbated သကဲ့သို့ငါ Re-ဝါယာကြိုးတွေ့ရုံအိပ်မက်နထေိုငျကြှနျတေျာ့သစ်ကိုချိန်ခွင်လျှာညှိနိုင်ကယုံကြည်ကြသည်။ masturbating စဉ်သို့သော်ရံဖန်ရံခါ wank အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များ (သာငါ၏အ gf နှင့်အတူလိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစား) ရှိနေသော်လည်း, ဟောင်းသောအရာတို့ကိုအချို့အကြောင်းကို ပို. ပို. အတှေးအဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ငါတစ်ယောက်တည်းနေစဉ်ငါ erotica စာဖတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါတကယ်ငါ့ရဲ့ပြန်လည်ဝါယာကြိုးအရှိန်မြှင့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား? ငါထင်တာကတော့စစ်မှန်တဲ့အရက်သမားတွေကလှည်းပေါ်ကချော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပြောတာပဲ။ 'ဒါကဘီယာပေါ့။ ဒါကအန္တရာယ်မရှိဘူးလား။ အထူးသဖြင့်ငါအရမ်းနိုးနိုးကြားကြားရှိခဲ့တယ်။ '
သို့သော်ထိုသို့ပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်တရားခံလား၊ ကျွန်ုပ်၏ဝါယာကြိုးများအရှိန်မြှင့်လာခြင်းရှိ၊ မရှိကိုကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်မကူညီဘဲမပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ သင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်လာတဲ့အချိန်ဟာယခုအချိန်ထိပါပဲ။
ငါတေးဂီတပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တဖန်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါမဝေးခဲ့ဘူး ငါ epic relapse မှုတ်ထွက်ထွက်ရှိခဲ့သည့် Thanksgiving ချိုးကျော်, ငါအရေးအပါဆုံးအရာအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပျကွောငျး - ငါငါ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူပြီးအောင်နှင့်သူမ၏ကာမဂုဏ်ကိုတန်ဖိုးထားငါ့စွမ်းရည်ကိုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါထပ်တလဲလဲ minimize ချင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်အစားသူတို့ကိုဖြတ်သန်းသွား၌ငါ၏သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ တံဆိပ်ကနေ့ ၁ ရက်ဆိုပေမယ့် ၅/၁၅၀ လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။ ၁၅၀ မှာ ၅ ရက် PMO ကောင်းတယ် အထူးသဖြင့်အစဉ်မပြတ် 1/5 (တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်) ကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ။
ငါနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါ့အစပျိုးအချို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံပိုမိုသိရှိလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါလိုချင်တာထက်လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာလည်းသဘောပေါက်လာပြီ နောက်ဆုံးတော့ငါ NoFap ခရီးကိုသွားတယ်၊ မဟုတ်ပါ NoPMO တစ်ယောက်ပါ။ ၎င်းသည် hard-code mode မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်ချစ်သောသူနှင့်သဘာဝကျကျဆက်သွယ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ၏အခငျြးကို fapstronauts မှကံကောင်းပါစေ။